किन रोकियो अक्सफोर्डको खोप परीक्षण ? - Deshko News Deshko News किन रोकियो अक्सफोर्डको खोप परीक्षण ? - Deshko News
यद्यपि सहभागी स्वयंसेवकमा खोपकै कारण उक्त समस्या देखिएको यकिन नभइसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । यसबारे थप अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र जाँचबुझ गरिने जनाइएको छ । खोपको अन्तिम अर्थात् तेस्रो परीक्षणको नतिजा कस्तो आउँछ भनेर संसारभरका मानिसले चासो व्यक्त गरिरहेका बेला पछिल्लो समाचार सार्वजनिक भएको हो । खोपको तेस्रो परीक्षणमा अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायत देशका झन्डै ३० हजार स्वयंसेवक सहभागी छन् ।
‘बिरामीको अवस्था खोपले हो वा होइन पहिला त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘यदि त्यसो हो भने कत्तिको गम्भीर समस्या हो र त्यो अरूमा दोहोरिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिन्छ ।’
‘कहिलेकाहीं यस्तो नकारात्मक लक्षण औषधि खानेबित्तिक्कै भयो भने त्यो औषधिकै कारणले नहुन पनि सक्छ । त्यसैले यसबारे थप अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने । कान्तिपुर दैनिकमा नवीन पोखरेलले खबर लेखेका छन् ।